Welcome to Aayaha Nolosha » GABDHAHA HINDIYA OO KA CABANAYA RAGGA SOOMAALIYEED
GABDHAHA HINDIYA OO KA CABANAYA RAGGA SOOMAALIYEED
October 16, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwo ka tagay dalalka Mareykanka, Yurub iyo wadammada Carabta ayaa lagu soo eedeeyay inay ku dheelaan gabdhaha ku nool dalka Hindiya.
Raggan ayaa qaar baan oo ka mid ah marka ay tagaan dalka Hindiya guur qarsoodi ah la gala gabdhaha u dhashay dalkaasi Hindiya, iyadoo ay jiraan rag Soomaali iyo Hindi isugu jira oo dulaaliin ah, raggaasina u fududeeyay guurka gabdhaha Hindiga ah.
Guurka oo dhowr nooc ah ayaa ragga qaar waxaa uu u yahay dalxiis, kuwaasoo marka ay gabdhaha guursadaan muddo kooban la jooga, kadibna isaga dhuunta, halka kuwo kale si qudba-siro ah u guursada marka fasaxooda ama joogitaankooda dalkaasi uu u dhmaadana gabdhihii ay guursadeen iska fura, kuwo kalena wayba ka dhuntaan iyagoon furin ayaa la yiri.
Ragga falkan sameeya qaarkood ayaa la sheegay gabdhaha ay ka doontaan qoysaskooda, kuwaas oo marka ay muddo aan badnayn la noolaada gabdhahaa la siiyay, balse markii ay ku dan gaaraan isaga dhuunta, taasoo walaac ku keentay mustaqbalka gabdhaha u dhashay dalka Hindiya oo qaarkood la takooro, qaar kalena xanuun maskaxeed uu ku dhaco.
Inta badan guurka ragga Soomaalida ah ayaa ka dhaca xaafadda Old City oo ah xaafad ay degan yihiin Hindida muslimiinta ee danyarta ah, halkaasoo sidoo kale Soomaali badan ay degan yihiin.
Waxaa la soo sheegayaa in Soomaalida degan dalka Hindiya haatan la necbaysto, taasna ay u keeneen ragga ka taga dalalka Yurub, Mareykanka iyo Carabta ee guurka bilaha kooban la gala gabdhaha dalka Hindiya, kuwaasoo msutaqbal la’aan u horseeday gabdho yaryar oo Hindi ah oo marka aad aragto aad da’dooda ku qiyaasayso 15-20 jir.
Gabdho badan ayaa qoyskooda ay takooreen, maadaama qaarkood guurka noocaasi oo kale ah aysan waalidkood raali ka aheyn, balse ay iyagu doorbidaan, kuwo kale ayaa dhaqaalo badan ka hela guurkaasi balse marka gabadhooda laga dhuunto ama la furo ka qoomameeya.
Waxaa la sheegay in ragga guur doonka ah inta aanay imaan dalka Hindiya ay la soo xiriiraan rag gacan ka siiya guurka gabdhaha Hindiya kuwaasoo isugu jira Soomaali iyo Hindi, waxayna fududeyntaasi ka helaan waxoogaa dhaqaalo ah.
Qaar ka mid ah dadyowga Hindida oo dhaqan ahaan aaminsan in haddii gabadha la furo aan mar dambe la gursan ayaa waxay mutsaqbal la’aan ku keentay gabdhahaasi bilooyinka kooban la qabay, halka qaar kalena ay guurka noocaasi ah ay ka dhaxlaan sida la sheegay xanuun dhanka maskaxda ah iyo fuquuq ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Dalka Hindiya waxaa jira rag Soomaali ah oo qaba xaasas Hindi ah, kuwaas oo si wanaagsan u dhaqda xaasaskooda, balse waxaa Soomaalida dalkaasi ku nool ceebaha iyo faxeeooyinka haatan lagu edeynayo u soo jiiday ragga Soomaalida ee ka tagaya dalalka dibadda, kuwaasoo qaarkood dalxiis u taga Hindiya, iyagoo muddada ay joogaan guur muddo gaaban ah la sameeya gabdhaha Hindiya.